Android pie uye iyo xbox imwe s controller inofanirwa kushanda zvakanaka pamwe chete
Kuru Nhau & Ongororo Android Pie uye iyo Xbox One S controller inofanirwa kushanda zvakanaka pamwe chete
Android Pie uye iyo Xbox One S controller inofanirwa kushanda zvakanaka pamwe chete
Hei, wakamboda kungobata iyo Xbox One S yako controller, kuibatanidza nefoni yako yeApple, uye nekusingaperi kumhanyira pamabhero mumutambo wako waunofarira?
Zvakanaka, kana iwe & apos; wakambosangana nezvishuwo zvakasikwa, saka iwe & apos; zvimwe wakakurumidza kuziva kuti nepo Xbox One S mutungamiriri achizofara kusangana nefoni yako, kuburitsa mamepu mumitambo yakawanda kunenge kuri kwese kwese, zvichipa mutongi akapfava isingashandisike nenhare mbozha.
Nekudaro, izvi zvinoita kunge zvese zvakagadziriswa neiyo Android Pie. Munoona, angangoita makore maviri apfuura vashandisi vakangwarira vakavhura tikiti rekutsigira neGoogle zvine chekuita nenyaya iyi inoshatisa, uye pakupedzisira, injinjini yeGoogle akaimaka se & apos; yakagadziriswa 'mazuva maviri apfuura.
Hooray, kudzora mepu ikozvino inofanira kushanda sekufunga!
Iva nepfungwa kuti Xbox One S controller haisiriyo yega yaunogona kushandisa neyako Android kifaa. Kunze kweanonyanya kufarira Elite One controller kana Sony & apos; s DS4 imwe, unogona zvakare kushandisa iyo yekudzokororazve yeiyo Xbox One controller, iyo yakagadziridzwa neBluetooth padhuze nekumugumo kwetambo yayo. Tarisa mufananidzo uri pazasi kuti uone kana mutungamiriri wako ane Bluetooth kana Microsoft & apos; s inobatanidza isina waya yekubatanidza chete.
Iyo Xbox One inodzora kumusoro haina & Bluetooth
Don & apos; usakanganwe kuti haisi yese mitambo yeApple inotsigira vatongi veBluetooth sevaya vataurwa pamusoro. Vamwe varidzi ve Xbox gamepad, zvakadaro, vane chikonzero chekufara.
at & t vs verizon yakabhadharwa
Verizon inowedzera nyowani 5G uye zvirongwa zvisina muganho zvemidziyo yakabatana
Runyerekupe: Anoteedzera iPhone SE ari mumabasa, kuti azarurwe mukupera kwaNyamavhuvhu
Sei vanhu vachivenga Apple?